श्रीमान श्रीमतीबीच म’नमुटाब भइरहन्छ भने बे’डरुममा यी कुराहरु नराखेकै राम्रो ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकश्रीमान श्रीमतीबीच म’नमुटाब भइरहन्छ भने बे’डरुममा यी कुराहरु नराखेकै राम्रो ?
काठमाडौं- सुत्ने कोठा नितान्त व्यक्तिगत स्थान हो जहाँ सम्पूर्ण आराम प्राप्त हुन्छ । मानिसहरू जब बेडरुममा पुग्छन् तब उनीहरू त’नावमुक्त हुन्छन् । सजिलो तथा सौम्य महसुस गर्छन् । तसर्थ बेडरुम डिजाइनरहरूको सदैव एउटै प्रयास हुन्छ कि यस्तो डिजाइन दिन सकियोस् जहाँ हरेक व्यक्ति एवं परिवारले सहज महसुस गर्न सकून् । यहाँ आराम, खुसी र सुखको अनुभूति होस् । यो स्थान राम्रोसँग डेकोरेटेड गरिएको होस् ।१.बेडरुमलाई सजाएर राख्नुहोस, बेडरुममा फोहोरहरु जम्मा हुन नदिनुहोस ।२.बेडरुममा पानी सँग सम्बन्धित फोटोहरु नराख्नुहोस,तर पहाडको फोटो भने राख्न सक्नुहुनेछ ।
३.बेडरुममा अ’पाराजिताको फूल राख्नुहोस ।४.बेडरुममा आ’शुँ आएको वा उ’दास खालको फोटो नराख्नुहोस, यो फोटोले सम्वन्धमा नै’रास्यता बढाउछ ।५.बेडरुममा झ्यालको छेउमा बेड हुनुहुदैन ।६.बेडरुममा मौसम अनुसार फल राख्नु पर्दछ ।७.बेडरुमको झ्याल फु’टेको, भा’च्येको हुनुहुदैन ।८.अहिलेकाई पति पत्नीमा बच्चा नभएको कारण पनि समस्या पर्न सक्छ त्यो कारणले गर्दा गर्भधारण गर्नको लागि दक्षिण, पश्चिममा बच्चा वा फूलेको फुलको फोटो लगाउनुहोस ।९.बेडरुममा फ्रिज या कंम्यूटर आदि हूनु पनि राम्रो मानिदैन किनकि यसबाट निक्लिने हा’निकारक तरंगले शरीरमा दुष्प्रभाव पार्दछ । यदि टीवि राख्न चाहानुहुन्छ भने दराजको भित्र हालेर राख्नु पर्दछ ।
अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:सुत्दा उत्तर दिशातर्फ सिरानी हुनु हुँदैन किनभने एक समान चुम्बकीय ध्रुव (पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवको चु’म्बकीय श’क्ति एवं शिर जुन मानव शरीरको उत्तरी ध्रुव हुन्छ) परस्पर विकर्षण हुन्छ । फलस्वरुप सुत्दा बा’धा उत्पन्न हुन सक्छ ।बेडरुमको भित्ताको रंग मनलाई प्र’फुल्लित गर्ने खालको, हल्का उज्जवल हुनुपर्छ, जुन दम्पती दुवैलाई मनपर्ने होस् । यहाँ फिक्का खालको रंग प्रयोग गर्नु हुंदैन । दम्पतीको कोठामा कालो, गाढा खै’रो रंग प्रयोग गर्नु हुंदैन । हल्का गुलाबी, हल्का पहेंलो, प्याजी, रातो एवं सुन्तला रंगको प्रयोग उचित हुन्छ ।
बेडरुमको सजावटमा उदाउँदो सूर्य, बगैचा, फूल, खेलिरहेका बालबालिका आदिको पोस्टर उपयुक्त हुन्छ । दम्पतीको कोठामा हल्का बुडवर्क एवं फर्निचर प्रयोग गर्नु पर्छ । पति–पत्नीको तस्वीरलाई कोठाको दक्षिण दिशाको भित्तामा सजाउनु पर्छ, यसबाट आपसी प्रेम, सद्भावना र एक–अर्काप्रति उत्तरदायित्वको भावनामा बृद्धि हुन्छ ।बेडका सामु ऐना राख्नु हुँदैन, यसबाट दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । यदि बेडरुममा ऐनाको आवश्यकता भए त्यसलाई सधैं पूर्व वा उत्तर दिशाको भित्तामा राख्नुपर्छ । यदि कुनै कारण वा स्थितिले बेडरुम अगाडि नै ड्रे’सिङ टेबल परे सुत्नुपूर्व ड्रे’सिङ टेबलको ऐना छो’पिदिनु उचित हुन्छ ।
बेडरुममा शो’केस, क्या’विनेट, क’वर्ड आदि स्टोरेजका लागि प्रयोग हुने कुनै पनि सामानलाई कोठाको दक्षिण वा पश्चिम दिशाको भित्तातिर राख्नु उपयुक्त हुन्छ । एटेच बाथरुमको ढोका सधैं ब’न्द रहोस् तथा कमोडको कभर छो’पिएको होस् भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।